I-acrylic camera i-fiberglass ilaphu abavelisi kunye nabanikezeli-China i-acrylic camera camera i-fiberglass yengubo yelaphu
Ingubo ye-Acrylic Fiberglass ilukiwe ngentambo ye-E-iglasi kunye nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
I-Fiberglass Cloth Yokwakha Iphenyane
I-fiberglass Cloth Yokwakhiwa Kwephenyane ilukwe ngentambo ye-E-iglasi kunye nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
Ingubo yeFiberglass 3m
I-fiberglass Cloth 3m ilukwe ngentambo ye-E-iglasi kunye nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
Ukufakwa kombane kwilaphu leFiberglass
Umbane we-fiberglass Cloth ilukiwe ngentambo ye-E-iglasi kunye nentsimbi ebunjiweyo, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
Umhlwa Resistant Fibreglass ingubo
Umhlwa Resistant Fibreglass ingubo ilukwe nge-E-iglasi vulu nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko wawutyabeka ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
Ilaphu iFiberglass ilukiwe ngentambo ye-E-iglasi kunye nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
Ixabiso eliphantsi leFiberglass Cloth
Ixabiso eliphantsi leFiberglass Cloth lilukiwe ngomsonto we-E-iglasi kunye nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
I-6mm eshinyeneyo iFiberglass Sheet Sheet
I-6mm eshinyeneyo iFiberglass Sheet ilukiwe nge-E-iglasi yomsonto kunye nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
3mm Ukutyeba kweFiberglass Cloth ilukwe ngentambo ye-E-iglasi kunye nentsimbi eyenziwe ngombala, emva koko yambathiswe ngeglu ye-acrylic. Kungaba macala omabini icala kunye namacala amabini ukutyabeka. Eli laphu yinto efanelekileyo yengubo yomlilo, ikhethini ye-welding, isiciko sokukhusela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangatye elidodobeleyo, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, amandla aphezulu, ukujongana nokusingqongileyo.
Ingubo yeFiberglass, Ingubo ye-Acrylic Fiberglass, Acrylic Camera Fibreglass, Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu, Ingubo yeAlglised fiberglass, Indwangu yeFiliclass Camera,